လမ်းဖောက်တဲ့အခါ | Layma's World
Posted on January 3, 2009 by layma
လူတွေဟာ အချိန်တန် အရွယ်ရောက်လာရင် လမ်းရိုးကြီးကို ငြီးငွေ့ လာကြတယ်…။တချို့ လူတွေက လမ်းသစ်ဖောက်ဖို့သတ္တိကောင်းကြတယ်…။ တချို့ က သတ္တိမကောင်းပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လမ်းသစ်ဖောက်လိုက်ကြတယ်..။ တချို့ က လမ်းဖောက်ဖို့ အများကြီး စဉ်းစားဆဲ… စဉ်းစားမြဲ… ဒီလိုနဲ့နှောင့်နှေး နေကြတယ်…။ တချို့ ကတော့ လမ်းသစ်ဖောက်ချင်ပေမယ့် လိုအပ်ချက်တွေ ပြည့်စုံဖို့ အတွက် ရုန်းကန်နေရတယ်..။ တချို့ ကတော့ လမ်းသစ်ဖောက်ဖို့သတ္တိ မရှိသေးဘူး…။
သတ္တိရှိဖို့ လိုသလား… သိပ်လိုတာပေါ့.. တကယ်တော့ ပျော်စရာလို့ထင်ရတဲ့ ဘ၀ သစ်တစ်ခုကို ဦးတည်တဲ့ အဲဒီလမ်းဟာ သိပ်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်…။ မျှော်လင့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ အန္တရာယ်တွေရော… မထင်မှတ်ထားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေရော လမ်းခရီးမှာ စောင့်နေကြတယ်..။ သာယာတဲ့ဘ၀ဆိုတဲ့ ဦးတည်တဲ့နေရာလည်းရှိတယ်… လမ်းညွှန်တွေလည်း ရှိတယ်…။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ဖောက်ကြည့် လျှောက်ကြည့်တဲ့အခါ… ထင်သလောက်မလွယ်မှန်း သိလာရမယ်…။ ဦးတည်တဲ့ နေရာကို ဘယ်တော့ ရောက်မယ်… ဘယ်လို ပုံစံမျိုးနဲ့ ရောက်မယ်… ရောက်နေတဲ့ နေရာက တစ်သက်လုံး ဒီပုံစံပဲဖြစ်နေပါ့မလား.. ဘာကိုမှ ရေရေရာရာ မသိနိုင်တဲ့ စမ်းတ၀ါးဝါးလျှောက်ရမယ့် လမ်းကို ဖောက်တော့မယ်ဆိုရင် သတ္တိရှိရမယ်…။
လက်ထပ်တယ်ဆိုတာ အရင်းနှီးဆုံး တစိမ်းနှစ်ယောက် ပေါင်းစည်းခြင်း လို့ မှတ်ယူလိုက်ပါ…။ ရည်းစားဘ၀မှာ ဟန်ဆောင်လို့ ရပေမယ့် အိမ်ထောင်သည်ဘ၀မှာ ဟန်ဆောင်လို့မရတော့ဘူး…။ သွေးမတော်သားမစပ် .. ကြီးပြင်းရာ အသိုင်းအ၀ိုင်းချင်းမတူတဲ့ တစိမ်းနှစ်ယောက်.. စိတ်တူကိုယ်တူ… ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ တော်တော်ကြီးကို ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေလည်း ဖြစ်တယ်…။ နှစ်ယောက်ထဲတင်မပြီးပြန်ဘူး.. သူ့ ဘက် ကိုယ့်ဘက်.. ဆွေမျိုး.. မိဘ.. မိတ်ဆွေ.. အပေါင်းအသင်း.. အများကြီး ပါဝင်ပတ်သက်နေမယ့် ပြဇာတ်တစ်ခုထဲကို ကိုယ်ရောက်သွားပြီလို့ သာ မှတ်လိုက်တော့ …။
သို့ ပါသော်လည်း… သို့ ပါသော်လည်း… လူဆိုတာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ခုံမင်တယ်.. စိန်ခေါ်မှုကို နှစ်သက်တယ်.. ပြသနာတစ်ခုခု ဖြေရှင်းနိုင်ရင် ပီတိဖြစ်တယ်…။ ဒီအချက် တွေနဲ့ တင် လမ်းသစ်ဖောက်ခြင်း… လက်ထပ်ခြင်းဟာ လုပ်ထိုက်ပါတယ်…။ လမ်းသစ်ဖောက်မယ့်သူတွေအတွက် လမ်းခရီးမှာ အခက်မကြုံရအောင် လေးမ သိသလောက် လမ်းညွှန် စာအုပ်တွေ လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်…။ လက်ထဲအရောက်မပို့ နိုင်တဲ့ အဝေးက သူငယ်ချင်းအနေနဲ့နာမည်ပဲရေးပေးပါ့မယ်..။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်.. ရှာဖတ်လိုက်ပေါ့နော်..။ တစ်ခုတော့ သတိပေးချင်တယ်… မင်္ဂလာမောင်မယ် နှစ်ဦးစလုံး ဖတ်မှ အပေးအယူမျှမယ်..။ တစ်ဦးတည်းဖတ်ခဲ့ရင် အသိကြွယ်နေတဲ့ အဲဒီ တစ်ဦးတည်း ကပဲ ပေးဆပ်သူဖြစ်နေလိမ့်မယ်…။
၁။ မင်္ဂလာဦးသူသို့ 
စာရေးဆရာတွေ အများကြီးပါဝင်ရေးသားထားတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးတွေ.. စုထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်တယ်…။ ဆုံးမစာ..ပညာပေးစာတွေ တကူးတက မဖတ်ချင်ရင် ဒီစာအုပ်လေးကို ဖတ်ပါ..။
၂။လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းအနုပညာ ( တင်မောင်မြင့် ( မြန်မာပြန်) )
စာအုပ်က နာမည် လှပေမယ့် ဖတ်ရတာ လေးမ တော့ သိပ်မကြိုက်လှဘူး…။
၃။ ထိမ်းမြားပေါင်းဖက် ရန်ဖြစ်လျက်ပင်ချစ်ကြင်နေနည်း ( အတ္တကျော်)
တော်တော်လေး ပြည့််စုံတဲ့ စာအုပ်ပါ…။ ခေါင်းစဉ်ထဲကလိုပဲ ရန်ဖြစ်နည်းပါ ပါတယ်..။ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမဆိုတာ မတူ..မတူ..ဘယ်နေရာမှ ..မတူ လို့ဒီစာအုပ်မှာ ရေးထားတယ်…။
၄။ ချစ်ဇနီး ချစ်လင် ( သာဓု )
နည်းလမ်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်မဟုတ်ပါဘူး…။ ရသစာပေ.. အိမ်ထောင်ရေး..၀တ္ထုတစ်အုပ်ပါ… ။
၅။ အေးအတူ ပူအမျှ ( ဒေါ်ရီကြိန် )
၆။ အပေးအယူမျှပါစေ ( ဒေါ်ရီကြိန် )
အပေးရော… အယူရော.. မျှမျှတတ ဖြစ်ချင်ရင် ဖတ်ပါ..။
ရ။ ရာသက်ပန်ရွယ် မောင်နှင့်မယ် ( မင်းစည်သူ )
ဒီစာအုပ်အကြောင်း.. မေ့နေတယ်… ပြန်ဖတ်မှသတိရမယ်..။
၈။ ပျိုလေးရည်းစား မောင့်စိတ်ထားနှင့် မောင့်ရဲ့သက်ထား ပျို့ စိတ်ထား ( ဥမ္မာရီ .. မဟာဝိဇ္ဖာ လက္ခဏာ ပါရဂူ )
ဗေဒင်မယုံဘူးဆိုပြီး လစ်လျူမရှုသင့်တဲ့ စာအုပ်ပါ..။ တော်တော်လေး နီးစပ်တိုက်ဆိုင်တာ တွေ့ ရပါတယ်..။ ဘယ်ရာသီဖွားနဲ့ဘယ်ရာသီဖွား ပေါင်းရင် ဘယ်လို အိမ်ထောင်ရေးမျိုးဆိုတာက စလို့ … ကိုယ့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်ရဲ့ စိတ်နဲ့သဘောသဘာဝ ကိုပါ အကြမ်းဖျင်း မှတ်သားနိုင်ပါတယ်…။ “တန်ဆေးလွန်ဘေး” ဆိုသလို … လိုသလောက်လေး ယုံကြည်မှတ်သားမယ်ဆိုရင် “ဆေး” ဖြစ်မှာပါ…။ “ ဘေး” ဖြစ်လောက်အောင်တော့ ယုံကြည်စွဲလန်းစိတ်မထားပါနဲ့ …။
“ ဖုံကတ္တီပါမှာ စုံညီစွာ ထိုင်ရင်း လက်ဆက်ခဲ့ကြသလို ဘ၀ခရီးလမ်းကို မမောမပန်း မကြမ်းမတမ်းဘဲ လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ…”
P.S. အော်… မေ့တော့မလို့ … ဟန်းနီးမွန်းခရီးကိုတော့ တစ်သက်စာ မမေ့နိုင်စရာတွေ အပြည့်ဖြစ်နေအောင် သေချာဖန်တီးခဲ့နော်…။
« ၂၀၀၈ ကိုမျက်နှာသစ်ပေးလိုက်တယ် 2008 နောက်ဆုံးည »
သားကြွက်, on January 3, 2009 at 11:47 pm said:
လမ်းသစ်ဖောက်တဲ့ အခါ အဆင်ပြေအောင် အခုတော့ မြက်ရှင်းတုန်း 😛 ဘော်လီဇာနဲ့ ကလော်ဖို့ ပိုက်ပိုက် စုနေတယ်ဗျ ။ ဟန်နီးမွန်းကိုတော့ ဘယ်ကို သွားရမလဲ စဉ်းစားအုံးမှ 🙂
ဖောက်ပြီးသား လမ်းကလေးမှာ ပျော်နေတဲ့ ခရီးသွားတစ်ယောက်က ဒီလမ်းကိုဆက်သွားမယ့် သူတွေအတွက်အမှာစကားလေး ပါးထားတာ ကျေးဇူးပါ လေ့လာမှတ်သားသွားပါတယ် ။
ပုံရိပ်, on January 4, 2009 at 1:43 am said:
မလေးမ… ဦးသာဓုရဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်ဖူးတယ်။ သူ့ခေတ် သူ့အခါနဲ့ဆို ဆရာကြီး ဦးသာဓုက ခေတ်မီတယ်လို့ ဆိုရမှာပဲ။
သီဟညိမ်း, on January 4, 2009 at 6:34 am said:
အမလေးမ က တော့ လက်တွေ့တန်ဘိုးကိုအလေးထားသလို လူငယ်တွေရဲ့
ဘ၀တန်ဘိုးကလည်း အလေးထားတယ် ကျနော်အမြင်ပေါ့
ကျနော့်အမြင်ကတော့တစ်ခုပဲ မတူညီတဲ့အရာကိုတူအောင်ညှိယူတာ အချစ်ပဲ
မွန်, on January 4, 2009 at 8:59 am said:
ဒါလေးကတော့ လေးမအာဘော်လို့ လုံးဝပြောနိုင်တယ်
ကမ်းကြိုလာတဲ့ လက်တဖက်ကို လှမ်းခိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတည်းက မမလေးမအာဘော်ကို ဟတ်ထိသွားတာ ခုထိပဲ ကမ်းကြိုမယ့်လူမရှိတော့ လှမ်းခိုလို့မရတာခက်စတာပဲ အောက်ကစာအုပ်တွေက ကြိုဖတ်ထားရင်ကောင်းမလားးးးး))))
THS, on January 4, 2009 at 9:47 pm said:
လမ်းသစ်ဖောက်ဖို့ အလှမ်းဝေးနေသေးလို့လား မသိဘူး ၊ အစ်မအညွန်းပေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေ လက်လှမ်းမမီသေးဘူး ၊ သွားရင်လာရင်း အွန်လိုင်းမှာ အဲဒီစာအုပ်တွေ မြင်မိရင် လက်တို့ဦးနော် အစ်မ 🙂
Anonymous, on January 5, 2009 at 10:50 am said:
လမ်းသစ် မ ဖေါက် ချင် ကြ ဘဲ ရိုး သား လွတ် လပ် စွာ ဘ၀ မှာ ပျော် ရွှင် နေ ကြ သူ တွေ အ တွက် ရော ..???
ShwunMi, on January 5, 2009 at 8:22 pm said:
နှစ်သစ်မှာ လမ်းသစ်ဖောက်သွားတဲ့ မလေးမ ရဲ့ သူငယ်ချင်း ပျော်ရွှင်ပါစေ..
အဲ့ဒီ စာအုပ်တွေ မီနဲ့ အလှမ်းဝေးနေဆဲ . . .
ရှာပေးပါ.. တွေ့ရင် ပြောပြပါ.. ဦးသာဓု ရေးတာကို ဖတ်ဖူးချင်တယ်=)
နေ့အိပ်မက်, on January 5, 2009 at 10:31 pm said:
ထိမ်းမြားပေါင်းဖက် ရန်ဖြစ်လျက်ပင်ချစ်ကြင်နေနည်းက ဖတ်ဖူးတယ်မမ၊ ဆရာသာဓုစာအုပ်လည်းဖတ်ဖူးတယ်… နှစ်ခုလုံးကြိုက်တယ်..။ အင်း.. အိမ်ထောင်ကျရင် စိတ်တူကိုယ်တူရှိဖို့က ရည်းစားဘ၀ကတည်းက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖုံးထားတာတွေ၊ ဟန်ဆောင်တာတွေမရှိမှဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်။ ဟီး.. နေ့အိပ်မက်ဆို ရေချိုးရင်း ဆပ်ပြာတိုက်ဖို့မေ့သွားတာကအစ တူတူနေရင် အိမ်အလုပ်ကို ဘယ်သူကဘာလုပ်ဖို့အထိ ပြောဖြစ်တယ်…. :P။ တချို့တွေက ရည်းစားဘ၀မှာဖုံးထားတာတွေ သိပ်များနေရင် အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ကျ အဆင်မပြေဘူးထင်တယ်နော်။ နှစ်ဘက်မိဘဆွေမျိုးတွေကိစ္စကျ ညှိရမှာပေါ့နော်။ အရေးအကြီးဆုံးက နှစ်တွေကြာသွားရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မငြီးငွေ့သွားဖို့ နွေးနွေးထွေးထွေးရှိဖို့လိုမယ်ထင်တာပဲ…။ဟီး.. တိဝူး.. လျှောက်ပြောကြည့်တာ.. :P။
MhawSayar, on January 6, 2009 at 12:24 am said:
ပို့စ်ကောင်း တစ်ပုဒ် ဖြစ်မယ်… ဒါမျိုးတွေ စောင့်နေတာကြာပြီ. အစ်မတွေ ဆီက ဘယ်တော့များ အဲဒီလို ဘဝ အတွက် လမ်းညွှန်လေးတွေ ထွက်လာမလဲ လို့မျှော်နေတာ. 😀
လောလောဆယ် Tick လုပ်သွားတယ်ဗျို့. အချိန်ရမှ သေသေချာချာ လာဖတ်ဦးမယ်. အစ်မရေ. 🙂
ညိမ်းညို, on January 6, 2009 at 3:46 am said:
ကိုကြီးမှော်ဆရာလိုပဲ ပြောရတော့မယ် 🙂
ဒါမျိုးတွေ စောင့်နေတာ ကြာပီ 😛
သေချာစွာ လေ့လာမှတ်သားသွားပါတယ် အစ်မလေးမရေ…
SoeMoe, on January 6, 2009 at 9:13 am said:
nu-san, on January 6, 2009 at 6:58 pm said:
လေးမပြောထားတဲ့ စာအုပ်တွေထဲက ဥမ္မာရီ စာအုပ်က လွဲရင် ကျန်တာတွေ အမ မဖတ်ဖူးဘူး.. စာအုပ်လမ်းညွှန်ဖတ်မိတော့ ဖတ်ကြည့်ချင်သေးတယ်.. ရန်ကုန်ပြန်ရောက်မှ ပြန်ရှာကြည့်ရမယ်.. 🙂
mtj, on January 6, 2009 at 9:44 pm said:
ဖောက်မယ် ဖောက်မယ်… တနေ့နေ့တော့ 😛
layma-layma, on January 10, 2009 at 6:00 pm said:
>သားကြွက်.. စာအုပ်နာမည်တွေ မှတ်ထားပေါ့.. ။လိုအပ်လာရင် ၀ယ်..။
>ပုံရိပ်.. ဟုတ်တယ်.. ခေတ်မီတယ်..။ လေးမတော့ ဖတ်ရတာ နည်းနည်း အသည်းယားတယ်…။
>သီဟ … အဲဒီ အချစ်က ဘယ်လောက်ထိပဲ စွမ်းသလဲဆိုတာ တစ်ချိန်ကျတော့ သီဟ.. သိလာလိမ့်မယ်..။ စွမ်းတော့စွမ်းပေမယ့် အရာရာတိုင်းကို မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး..။
>မွန်.. လေးမအာဘော် မဟုတ်ပါဘူး မွန်ရဲ့..။ ဘိသိက်ဆရာတွေ ရဲ့ အာဘော်ပါ..။ မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာ သူတို့အော်အော်နေတာ သဘောကျလို့ ..။ 🙂
>ဘိုတင့်.. တွေ့ ရင်တော့ တို့ လိုက်ပါ့မယ်..။ တွေ့ တော့မတွေ့ ဘူး..။
>Anonymous .. အဲလိုလူတွေ အတွက်တော့ လမ်းညွှန် ဘယ်လိုမလဲရှင်..။ တစ်ခုပဲ.. စိတ်ဓါတ်ကျ အားငယ်ချိန်.. တစ်ယောက်ထဲ နေမကောင်းဖြစ်ချိန်တွေမှာ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေလည်း အနားမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် တစ်ယောက်ထဲ မနာမကျင် ဘယ်လို ဖြတ်သန်း၇မလဲဆိုတာ ပြင်ဆင်ထားရင် အားလုံး အိုကေပြီ..။
>မီ.. စာအုပ်တွေက လေးမမှာ အားလုံးရှိ..။ ရိုက်တင်ပေးရမှာ ပျင်း..။
>နေ့ အိပ်မက်.. တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ရည်းစားဘ၀မှာ ချစ်စရာ အကျင့်လေးလို့သတ်မှတ်ထားပေမယ့် အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ ရောက်တော့ အမြင်ကတ်စရာလေး ဆိုတာတွေလည်း ရှိတယ်နော…။
>မှော်ဆရာ.. ဘိုညိမ်း.. ဒါမျိုးတွေ စောင့်နေတာ ကြာပြီ ဆိုပါလား..။ 😛
> စိုးမိုး.. လည်လိုက်ပါ.. လည်လိုက်နော်..။
>မနုစံ.. အစ်မ ဥမ္မာရီ စာအုပ် မှန်လား.. အစ်မ..။
>ကိုတဂျန်… တိတယ်.. တိတယ်… တနေ့ နေ့ တော့..။